Kulan afurin ah ayaa shalay lugu qabtay dalka Holland magalada Zwoolla - Latest News Updates
Kulan afurin ah ayaa shalay lugu qabtay dalka Holland magalada Zwoolla
Afurkan ayaa waxaa ka soo qeybgalay soomalida dagan magalada Zwoolla iyo nawaxigeda. Inta aan afurka la gaarin ayaa goobtaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee Zwoolla Cabdulqaadir Cali Nuune asagoona ugu mahad celiyay gabdhihii waqtigooda u huray diyarinta afurka iyo dhalinyarada jaaliyadda oo markaasi waday qabka loo kala nidaminayay dadka ka soo qeybgalay kulankaasi qiimaha badanaa.
Sidoo kale waxaa uu gudoomiyaha daaha ka qaaday in uu jiro will soomaliyeed oo aad ugu xanunsanayo tuula u dhow magaladaan Zwoolla dhaqaatiirta isbitaalka ayaa sheegay in ay wiilkaasi xaaladiisa caafimaad ay halis tahay oo ay isbitaalka uga dhamatay lana geeyey gurugiisa inta uga dhiman noloshiisa inkastoo geri iyo nolol Allah hayo.
Asagoo gudoomiyaha halkaasi ugu furay sanduuq dhaqaala aruurin si loogu celiyo wadankiisa hooyo ee Somaliya waxaa uuna shegay sadaqada la baxasado in ay ugu fiican tahay sadaqada bisha ramadaan.
Gudoomiyaha Waxaa uu ku sii dheeraday dhibaatada haysato wiilkaasi oo mudo Ku dhwaada 10 sanadood uusan arkin waalidkiis haatane uu Ku jiro xiri salarnas ah tan kaliya uu u baahan yahay tikidka diyaarada si uu hadii tii ilaah u timaado uu Ku ag dhinto waalidkiisa. Waxaa halkaasi loogu duceeyey dhamaan ummadda islaamka gaarahaan ummadda soomaliyeed, Waxaa halkaasi lugu dukaday salaadii makhribka oo ayna kuwada duceysteen jaaliyada oo idil.
Previous articleWasaaradda Waxbarashada oo Ardayda Beri galeysa Imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare dar daaran u jeedisay.
Next articleGuddoomiye Yariisow oo shaqo joojin ku sameeyay mid ka mid ah Kuxigeenadiisa